Faah-Faahin:Safarkii Madaxweynaha Somalia uu ku tagay magaalada Baladweyne – Radio Daljir
Diseembar 22, 2015 4:19 b 0
Somalia, December 22, 2015-(Daljir)_ Madaxweynaha dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka qayb galay xaflad ay xilka kula kala wareegayaan Gudoomiyaha cusub ee Hiiraan iyo Kii hore.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa kadib la kulmay Odayaasha Dhaqanka, isagoo kala hadlay ka qayb galka shir maamul usamaynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe oo dowladdu sheegtay in lagu qabanyo Magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe.
Odayaasha Hiiraan ayaa ku dhagan inaysan qaadanayn in shirka maamul usamaynta lagu qabto Jowhar, waxayna go’aankii dowladdu ugu magacowday Jawhar in shirka lagu qabtay ku tilmaameen mid lagu deg degay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Odayaasha Hiiraan u sheegay inay adag tahay in si fudud loo sameeyo maamul ay dadku u Dhanyihiin, hadaanan la helin shacabka Gobolka hiiraan kaalintooda.
Waxay Odayaashu sheegeen in shirka lagu qabtay Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne, iyagoo ku tilmaamay Jawhar meel hada aan lagu qaban karin shirka.
Madaxweynaha iyo waftigii uu hogaaminayey ayaa wali kusugan magaalada Baladweyne, waxaan waftiga madaxweynaha ka mid ah Wasiirka arimaha gudaha Odaywaa.
Maraykanka oo Duqayn ku Dilay Saraakiil ka tirsan Al-shabaab